Soo-saareyaasha Weelasha & Dambiisha - Shiinaha Weelasha & Dambiisha Alaab-qeybiyeyaasha & Warshad
Dog Travel Gear Bag Tote Bag Kaydinta Alaabada Bixinta
Tilmaamaha Tilmaamaha Ku habboon safarka saaxiibkaa dhogorta leh, bacda safarka eeyga waxay la timaaddaa laba cunto oo gudaha ah / boorsooyin lagu daweeyo iyo derin la nadiifin karo. Cabbiraadda 39 cm L x 24 cm W x 32cm H markii si buuxda loo furay, boorsadani waxay ka kooban tahay meel weyn oo gudaha ah oo ay ku jirto jeebka la gashado, iyo boorsada laastikada ah iyo guddi siibaysan oo ku taal bannaanka dhammaan xayawaankaaga. Boorsadan safarka eey eey waxay ka samaysan tahay wax tayo leh oo laga sameeyay biyo nylon u adkaysta. Xakamaynta suufka ah ee la hagaajin karo waa inay ...
Cunto-siiyaha Tooska ah ee Bixiyaha leh ee Wakhtiga Dijitaalka eey Bixiyaha
Waxyaabaha ku jira quudinta casriga ah ee cuntada xayawaanka rabaayadda ahi waa caag ABS oo heer sare ah oo aamin ah oo waaraya.Quudiyeyaashu waxay leeyihiin afar cunno oo anshaxdarro ah oo la dhigo jeexdin.Waad duubi kartaa 8 cod oo farriin labaad ah si aad u xasuusiso xayawaankaaga inay wax cunaan, waxay quudin kartaa ilaa 4 maalmood.Sidoo kale muuji LED, shaqeyn saacad iyo bandhig awood yar. Si aad u xoraysid gacmahaaga!
Tallaabada Xaydha Eeyaha Xayawaanka Biyaha ee Beer Biyoodka
Qalabkeena qalabka wax lagu kala iibsado ee otomaatiga ah waa caag PP oo tayo sare leh oo ah iftiin aad u sarreeya oo waara. Ha ka baqin qaniinyada eeyahaaga. Marka tuubada biyuhu ay kuxirantahay quudiyaha biyaha, kaliya waxay ubaahantahay layliyo fudud, eeyahaaga waxay ku cabi karaan biyo macaan talaabo talaabo lasaarayo.Loo yaree dhibka badalashada biyaha iyo itimaalka cudurka.
Boorsada Safarka ee Dog Gear Dog Safarka Bag
Waxyaabaha ku jira boorsadayada safarka ee xayawaanka la qaadan karo waa dhar cufan oo dhaadheer oo loo yaqaan 'oxford fabric' oo ah biyo-diid iyo adkeysi. Boorsada safarka ee xayawaanka la qaadan karo oo baaxad weyn ayaa ah qalabka darajada koowaad ee eeyaha marka ay la safrayaan milkiilayaashooda. Nakhshadeynta badan ee is dhex galka ayaa kaa caawin karta inaad qaadato noocyada kala duwan ee cuntada eyga iyo agabka kale. Yaree culeyskaaga safarka.
Dhalada silikoon eeyaha Dhalada Weelka Cuntada la qaadan karo
Astaamaha Sharaxa Labada dhalo ee biyaha xayawaanka ah ee loogu talagalay laba qol, oo cuntada ka dhigaysa mid qalalan iyo biyo nadiif ah. Waxay ku habboon tahay waxqabadyo kala duwan oo dibedda ah. Xayawaanka ku habboon ee aad ku raaci karto eeyaha, Ku habboon socodka, socodka, orodka, kaamamaynta iyo dhacdooyinka cayaaraha. Sida loo Isticmaalo 1. Buuxi dhalada oo biyo ah kuna daboolo dhalada daboolka, rux si aad u hubiso inay cadeyn tahay inay daadatay iyo in kale. 2.Ha isku laaban oo ha furin silsiladaha balaastigga ah si joogto ah, waa kuwo la isticmaali karo. 3. Xidho ...
Tilmaamaha Tilmaamaha Isku laaban, culeys fudud, si fudud u nadiifiya & dhaqso u qalala. Ku habboon qaadashada safarada dhaadheer ama fasaxa. Qalab tayo sare leh, oo ku habboon in la qaado oo meel la dhigo. Heer sare oo badbaado leh oo loogu talagalay cuntadaada, biyaha iyo daaweynta. Naqshad la diray, waxay qaadan kartaa cuntada meel taal meel kasta. Qeexitaannada Midabka: Waxyaabaha Madow: Cabbirka Dharka Oxford: Qolka loogu talagalay 800G cuntada qalalan Miisaanka alaabta: 50g / 0.11lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno alaabteenna xilliyada ...
Silicone Jungle Bowl Gaabis Cunto Dog Ey Ah Oo Quudinta Kahortagga Dareenka
Tilmaamaha Tilmaamaha 1.Made ka samaysan waxyaabo ammaan ah oo aan sun ahayn, xoog, iska caabin qaniinyada, oo aad waxtar u leh. 2.Saxaad ahaan u yaree xawaaraha cunida, si loo soo celiyo qaabab cunista eyga asalka ah. 3.Ka hortagga buurnida, dhacdooyinka cudurrada wadnaha iyo xididdada caloosha iyo caloosha iyo cudurrada kale ee caloosha ku dhaca ayaa si weyn hoos ugu dhacay. 4.Waxay ku habboon tahay isticmaalka maalin kasta. Weelkan qunyar socodka ah wuxuu sidoo kale ku habboon yahay xayawaanka leh anorexia, oo kicin kara nooca ugaarsiga cuntada, tu ...
Boorsada Eyda Safarka Cunnada Dog Gear Boorsada Bag
Tilmaamaha Tilmaame-bixiyahaan waxaa lagu sameeyay dhar Oxford ah wuxuuna leeyahay seddex mesh hawo mesh oo bixiya jawi qabow iyo aragti fudud. Waxay ka kooban tahay madal laba-lugood leh oo si fudud loogu dhaqdhaqaaqo waxayna sidoo kale leedahay laba jeeb oo waaweyn oo lagu kaydiyo wax kasta oo adiga iyo wehelkaagu u baahan yihiin. Jeebooyin badan oo kaa caawinaya inaad waxyaabaha si dhakhso leh oo fudeyd leh u hesho, waxaa ku jira qayb weyn oo weyn oo loo qaybiyay 2 (kala-bixiyaha laga saari karo haddii aad doorbido 1 aag weyn), 1 jeebka hore ee jajabka ah, 2 jeebadaha netka ah, 1 gudaha ...
Interactive Dog Bowl Anti Choking Jungle Bowl Gaabiyaha Gaaban
Tilmaamaha Tilmaamaha Naqshadeynta hawdka ee is-dhexgalka gaarka ah wuxuu dhiirrigeliyaa cunno gaabis ah oo caafimaad leh, wuxuu ka caawiyaa ka hortagga cayilka, bararka, lallabbada iyo cunidda badan. Naqshadda jilicsan ee afka ayaa sidoo kale ka ilaalisa carrabka xayawaanka in la xoqo. Ku habboon cuntada qoyan, cuntada qalalan iyo biyaha. Qeexitaannada Midabka: Waxyaabaha Cagaaran: Cabbirka PP: 22.5cm * 29cm * 7cm Miisaanka wax soo saarka: 440g / 0.97lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiino badeecadeena si xilliyeed ah si aan u sii wadno feejignaanta horumarka ugu dambeeyay ee la xiriira ...
Eey Biyo-cabe Biyo-cabe Biyo-Biyaha Fresh Bannaanka
Noocyada sharraxaad Hadiyad aad u fiican eeygaaga xagaaga kulul, Isha wax lagu cabbo ayaa si wax ku ool ah u cusbooneysiisa eeygaaga. Ilka biyaha eeyga ayaa si tartiib tartiib ah u socda oo biyuhu way soo baxaan, helitaanka joogtada ah ee biyo nadiif ah iyo nadiif ah, isha eygu waligeed uma baahna nadiifin. Isha cabitaanka waxay ka samaysan tahay bir birta ah oo birta ah oo tayo sare leh, macsaar saafi ah oo asaas u ah shaandhada, taas oo aan sahlaneyn in lagu kululeeyo qorraxda hoosteeda, aadna u waari karta. Sida Loo Isticmaalo Ku kala fur boolal tubbada biyaha galiya badeecada ...
Dhalo Ey Laabi Laabi Karo Oo Dhalo Cuntada Weelka Cuntada ah
Astaamaha Sharaxaad Bakeelka eeygan waxaa laga sameeyaa walxo silikoon ah oo jilicsan oo u oggolaanaya inay isku laabanto. Naqshadda burbursan ee fijaanadan xayawaanka ah waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo ku habboon in lagu raro boorsadaada ama rucksack markaad safreyso ama aadayso safar, socdaal ama safar maalinle ah oo aad la geysatid xayawaankaaga. Baaquli kastaa waxay la timaadaa cutub yar oo fududaynaysa inaad ku dhejiso boorsadaada ama suunkaaga si aad u dhigto meel aamin ah. Faahfaahinta Midabka: Casaan / buluug / huruud / cagaar / liin casaan / midab casaan / madow M ...
Xayawaanka Safarka ee Alaabada La qaadan karo ee Weelka Cuntada Weelka Weelka ah
Tilmaamaha Tilmaanta 1. Ku habboon cuntada iyo biyaha. 2. Kufiican safarka, boorsada dhabarka, kaamamaynta iyo adeegsiga maalin kasta. 3. Miisaan fudud oo leh tayo sare leh dhisme. 4. Gunta hoose ee xasilloonida dheeriga ah. 5. Furitaanka duuban ee daadintiisa. 6. Muuqaal sare oo goyn muuqaal ah. 7. Wareeg u laallaada dhabarka si keyd fudud loo dhigo 8. Dhar dibedda ka sameysan oo caag ah oo qalalan oo dhaqso leh. Tilmaamaha Midabka: Waxyaabaha Lagu Daro Olive: Oxford Fabric + Polyester + Nylon + PP Size: 20cm * 20cm * 9.5cm Miisaanka alaabada: 50g / 0 ...